Alibaba သည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်ရေး ပလက်ဖောင်း နှင့် ၀ န်ဆောင်မှု ကိုစတင် ခဲ့သည် - Pandaily
Alibaba သည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်ရေး ပလက်ဖောင်း နှင့် ၀ န်ဆောင်မှု ကိုစတင် ခဲ့သည်
Jun 10, 2022, 17:07ညနေ 2022/06/10 23:26:16 Pandaily
နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ် မှုတွင်ပါ ၀ င် နေသော အသေးစားနှင့်အလတ်စား ကုန်သည် များအတွက် အပြည့်အဝ ချိတ်ဆက်ထားသော နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်ရေး ပလက်ဖောင်း တစ်ခု ပေးရန် အလီ ဘာ ဘာ သည် ကြာသပတေးနေ့ ညက ကြေငြာ ခဲ့သည်အဆင့်မြှင့်တင် ထားသော ဒီဂျစ်တယ် ပေါင်းစည်းထားသော ၀ န်ဆောင်မှု ဖြေရှင်းချက်ကို ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စတင် ရန်စီစဉ် ထားသည်ထုတ်ကုန် အသစ်သည် ကြိုတင် ရောင်းချ ခြင်း၊ ရောင်းချ ခြင်းနှင့် ရောင်းချ ပြီးနောက် အဆင့်သုံးဆင့် ၏အဓိက ပြ issues နာများကို ဖုံးလွှမ်း လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သည် များ အားလုံးအတွက် အပြည့်အဝ ဖွင့်လှစ် နိုင်ပြီး အမှာစာ များ လက်ခံ ခြင်း၊ ပေးပို့ ခြင်းနှင့် ငွေပေးချေ ခြင်းများကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့ စေ ရန်ကူညီ လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Alibaba အထွေထွေမန်နေဂျာ Zhang Kuo က ကြာသပတေးနေ့ ညနေပိုင်းက တရားဝင် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် မှုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်၎င်းသည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် “ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိပ်ကမ်း” ဖြစ်လာ လိမ့်မည်ယနေ့ စျေးကွက် အခြေအနေ အသစ် အောက်တွင် လည်ပတ် ပါ။
ယခုနှစ် မေ လမှ စ၍ အလီ ဘာ ဘာ သည် နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှု တွင်ပါ ၀ င်သော ကုမ္ပဏီများ အား ကပ် ရောဂါ ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အန္တရာယ် များနှင့် စိန်ခေါ်မှု များကိုပိုမို ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ် နိုင်ရန် ကူညီရန် အစီအစဉ်များ စွာ ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်မှု ၏ရှုထောင့် အားလုံး နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ထောက်ပံ့ ပို့ဆောင် ရေး၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် စုဆောင်း မှုနှင့် လိုက်နာ မှု အာမခံချက် များအပါအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးကို လွှမ်းခြုံ သည့် ဒီဂျစ်တယ် ဆိပ်ကမ်း အစီအစဉ် ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ယခုႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သည္ အားလံုး အတြက္ Logistics, Finance စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ ေသာ္လည္း Alibaba .com အဖြဲ႕၀င္ မ်ားသာ အသံုးျပဳ ႏုိင္ေၾကာင္း ယင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ကို ႀကိဳးစား ေနသည့္ ကုန္သည္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
နောက်ပိုင်းတွင် Alibaba .com သည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce ၏အဓိက ဆက်နွယ်မှု များအားလုံးကို လွှမ်းခြုံ သော နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်ရေး ကယ်ဆယ်ရေး အစီအမံ ၁၀ ခုကို တရားဝင် စတင်ခဲ့သည်။ ဤ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဘဏ္ services ာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည် အခြား အစီအမံ များနှင့်အတူ မတ်လ ကုန် ကတည်းက စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်မေလ ၂၀ ရက်အထိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပေါင်း ၁၃၀၀ ၀ ကို အကျိုးပြု ခဲ့ပြီး ရန်ပုံငွေ ယွမ် ၁. ၂၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၉. ၅ သန်း) ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Alibaba.com သည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ငွေပေးချေမှု ဝန်ဆောင်မှု ကိုစတင် ခဲ့သည်
၂၀ ၂၂ ခုႏွစ္ ပထမ ငါး လအတြင္း တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ပို႔ကုန္ သည္ ယြမ္ ၈ ဒသမ ၉၄ ထရီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ၃၆ ထရီလီယံ) ရွိခဲ့ၿပီး ၁၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ အေကာက္ခြန္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဦးစီးဌာနမွ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ သိရသည္။ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ၏စွမ်းဆောင်ရည် မှာ ထူးခြား သည်။ ပို့ကုန် သည်ယွမ် ၅. ၂၈ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ ၈၉. ၄ ဘီလီယံ) ၊ ၁၆. ၇% တိုးတက်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ပို့ကုန် တန်ဖိုး ၏ ၅၉% ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဤ ကုန်သွယ် မှုသည် တိုင်းပြည်၏ ပို့ကုန် များကိုထောက်ပံ့ ရန် အရေးပါသော မ ဏ္ become ိုင် တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ထို့အပြင် Alibaba .com မှ အချက်အလက်များအရ လွန်ခဲ့သော သုံး နှစ်အတွင်း စွမ်းအင် အ သစ်၊ စက် ယန္တရား၊ မော်တော်ယာဉ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် စားသုံးသူ အီလက်ထရောနစ် စသည့် တန်ဖိုး မြင့် စက်မှုလုပ်ငန်း များသည် တိုးတက် မှုအတွက် သိသိသာသာ အထောက်အကူပြု ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီ မှ April ပြီလ အထိ ကုမ္ပဏီ၏ စွမ်းအင် လုပ်ငန်း သစ် ၏ပြ ည် တွင်း အရောင်းအ ၀ ယ် ပမာဏသည် တစ်နှစ်လျှင် ၁၃၀% ကျော် တိုးတက်ခဲ့သည်။
Menusifu: အာရှ စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင် တွေကို နည်းပညာ ယူဆောင် လာဖို့ မစ်ရှင်
အာရှ အစားအစာ များ သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခေတ် ရေစီးကြောင်း သို့ ၀ င်ရောက် လာသည်နှင့်အမျှ စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင် များထံမှ ၀ ယ်လိုအား မှာ မြင့်တက် လာခဲ့သည်။ စက်မှု လုပ်ငန်းတွင် အမြစ်တွယ် နေသော Menusiff သည် ၎င်းတို့အား အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းလည်ပတ် မှုပြ problems နာ များ ကိုဖြေရှင်း ရန်နှင့် အတူတကွ ကြီးထွား ရန်ကူညီ ရန်မျှော်လင့် သည်။
ကဏ္ဍ ခွဲမထား Jun 02 ဇွန် 3, 2022
အေမရိကန္သို႔ တင္သြင္းမည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ေရွာင္လႊဲၿပီး တ႐ုတ္ေငြလဲႏႈန္းကို ႀကိဳးကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာ
Bloomberg သတင်းရင်းမြစ်ကို ကိုးကားပြီး အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်မယ့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းအစီရင်ခံစာမှာ တရုတ်ဟာ တရားဝင်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုခြယ်လှယ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။